Iindaba-Rech Chemical Co Ltd.
Ukusetyenziswa kwesulphate yentsimbi kwisamente
I-ferrous sulfate monohydrate isetyenziswa ikakhulu njenge-arhente yokunciphisa kumzi-mveliso wesamente ukuze kufezekiswe umxholo we-Cr (VI) ongaphantsi kwe-2 mg / L. Kwifom ye-30% ye-monohydrated form, i-sulphate ene-ferrous yeyona nto iphambili esetyenziswa kwimarike yesamente ukunciphisa i-chromium enamafutha. Le mveliso yeyona ndlela inokuthenjwa necocekileyo enokusetyenziswa ngabenzi beesamente ngokunxulumene nezinye iindlela ezikhoyo kwintengiso.
UMBONISO ISAZISO SOKULIBazisa
Ngenxa yobhubhane we-COVID-19, izithintelo zokuhamba, kunye nokungaqiniseki okuqhubekayo kwihlabathi liphela, i-EUROTIER 2020 kunye neVIV ASIA 2021 ziguqula ikhalenda yayo yokubonisa ukukhusela imiboniso eyimpumelelo phakathi kwemimandla ngexesha elifanelekileyo lowama-2021.
INGUQUKO ENTSHA YE WEBSITE YOKUTSHINTSHWA KWEEKHEMIKHALI
Ukubonelela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu kunye nokusebenza ngokukuko, i-RECH CHEMICAL ihlaziye inguqulelo entsha yewebhusayithi ukusukela ngoku. Ukujonge phambili kwinkxaso evela kubathengi njengamaxesha onke. Siya kuhlala sinika eyona nkonzo intle.
I-Rech Chemical Co.Ltd
I-Balixiangxie E1-12F NO.459, iFurong Road Changsha Hunan China
[imeyile ikhuselwe] [imeyile ikhuselwe]